ယနေ့ မြန်မာစာပေလောကတွင် ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ယနေ့ မြန်မာစာပေလောကတွင် ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ…
ယနေ့ မြန်မာစာပေလောကတွင် ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ…
Posted by နွယ်ပင် on Dec 28, 2010 in Myanma News, News |7comments
အဓိကအားဖြင့် မြန်မာစာပေလောကမှာ ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာတွေဟာ စာပေစိစစ်ရေးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာစာပေလောကသား တစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာစာပေနယ်မှာ စာပေစိစစ်ရေးဟာ ဘယ်လောက်ဆိုးရွား ဒုက္ခပေးလှတယ်ဆိုတာကို အချက်အလက်တွေ ရှာဖွေပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် BBC အနေနဲ့ တစ်ပြည်လုံးသိအောင် ဖြန့်ချိပေးပါခင်ဗျား….
စာပေစိစစ်ရေးဟာ မြန်မာစာပေအညွန့်တုံးဖို့သက်သက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စည်းကမ်းတွေဆိုပြီး စာအုပ်စိမ်းလေးတစ်အုပ်နဲ့ စည်းကမ်းချက်၁၀၀လောက်ထုတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိကျရေရာတဲ့၊ ဥပဒေသဘောသက်ဝင်တဲ့ အချက်တစ်ချက်မှ မပါပါ။ အကုန်ယေဘုယျသဘော လျှောက်ရေးထားတာချည်းပါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့် … မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်သော စာပေများရေးသားခွင့်မပြု ဆိုတာမျိုး လူငယ်များ အတုယူမှားစေနိုင်သော စာပေများမရေးသားရ ဆိုတာမျိုးတွေ ချည်းပါ။ အဲဒီလို အချက်တွေက အဓိပ္ပါယ်ကောက်ရ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်သောဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာလဲ။ လုံချည်မ၀တ်တာ ဘောင်းဘီဝတ်တာ ကို ဆိုလိုတာလား။
… အစရှိသဖြင့် အားလုံးဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ မကင်းတဲ့လူတွေချည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေကိုတော့ တစ်ဦးတစ်ဦးကို ဂျာနယ် ၅စောင် ၆စောင်စီလောက် လုပ်ခွင့်ပေးထားပြီး စာပေသမား စစ်စစ်တွေအတွက်ကတော့ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့်ကတ် ၀ယ်ထုတ်ကြရပါတယ်။ သတင်းဂျာနယ်အတွက် ထုတ်ဝေခွင့်ကတ်က အပြင်ပေါက်ဈေး သိန်း၅၀အထက်မှာရှိပြီး တခြားအမျိုးအစား ဂျာနယ်တွေ အတွက်ကတော့ သိန်း၃၀၀န်းကျင်မှာရှိပါတယ်။ ဒါတောင် နောက်ခံ စစ်အာဏာရှင် အဆက်အသွယ်မရှိပဲ ထုတ်ရင် ခဏခဏအပိတ်ခံရတာမျိုး အဖြတ်အတောက် သူများထက်ပိုခံရတာမျိုးနဲ့ အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးပါတယ်။
တော်ရုံတန်ရုံလူဟာ စာအုပ်ထုတ်ဖို့ဆိုရင် စာပေစိစစ်ရေးကိုကြောက်တာနဲ့ စိတ်ပျက်သွားလောက်ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို သုံးကြိမ်တိတိအပြန်ပြန်အလှန်လှန်တင်ပြပြီးမှ ခွင့်ပြုချက်ပေးပါတယ်။ ပထမအဆင့် – စာမူတင်ပြရတာပါ။ စာမူသုံးစုံ တင်ပြရပါတယ်။ အဲဒီစာမူသုံးစုံကို စာစစ်မှုးလို့ခေါ်တဲ့စာရေးကနေ ဌာနခွဲမှုး၊ ဌာနမှုး၊ လက်ထောက်ညွှန်မှုး၊ ဒုညွှန်မှုး။ ညွှန်မှုးစသဖြင့် အဆင်ဆင့်ဖတ်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်တောက်ပြင်ဆင်မှုပြုပါတယ်။ အဆင့်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်(လူတစ်ယောက်တစ်ယောက်ဆီ)မှာ အချိန်၃လစီ ကြာခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာတင် ခွင့်ပြုချက်မရတော့တာက တစ်လကို အုပ်၄၀၀ခန့်ရှိပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့် – မျက်နှာဖုံးတင်ပြရပါတယ်။ ဒီအခါမှာလည်း ခုနကလိုပဲ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်တောက် ပြင်ဆင်ကြသေးတာပါ။ ဒီလိုမျက်နှာဖုံးတင်ချိန်မှာ မျက်နှာဖုံးကို မကြိုက်ရင် အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းလဲခိုင်းသလို ဒီအချိန်ကျမှ စာပေစိစစ်ရေးမှာ မူဝါဒအပြောင်းအလဲဖြစ်တာကြောင့် ပထမအဆင့်ခွင်ပြုထားပြီးသား စာမူကိုပါ ပြန်ပိတ်လိုက်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ မူဝါဒအပြောင်းအလဲဆိုတာကလဲ တစ်လတစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်နေတာမျိုးပါ။ အပတ်စဉ်အစည်အဝေးမှာ အထက်လူကြီးရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားတစ်ခွန်းဟာ ဥပဒေပါပဲ။ ဒီလိုအဆင့်ကျမှ ပြန်အပိတ်ခံရတဲ့ စာမူပေါင်းက ပျမ်းမျှ တစ်လကို အုပ်၁၀၀ခန့်ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ – ချုပ်လုပ်ပြီး ဖြန့်ချီရန်စာအုပ်တင်ပြရတာပါ။ ဒါကို မူချောတင်တယ် ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာလည်း အခန့်မသင့်ရင် ပြန်ပိတ်တာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် စာမူဘ၀မှာသူတို့ ဖြတ်တောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထဲက တစ်လုံးတစ်လေများ မှားယွင်းရိုက်မိရင် တစ်ခါတည်း စာအုပ်အားလုံး ပြန်ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ ဒီလိုအဆင့်ဆင့်စော စိတ်ဒုက္ခငရဲတွေကို ဖြတ်သန်းပြီးလို့မှ စာအုပ်စာတမ်းအဖြစ် ထုတ်ဝေလိုက်ပြီဆိုပါစို့။ သူတို့ဂရုမပြုမိလိုက်တဲ့ အရေးအသား တစ်ခုတစ်လေကိုများ ကောင်းနိုးရာရာ တင်ပြတဲ့သဘောနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားအသံလွှင့်ဌာနတွေက တင်ပြလိုက်တာမျိုးဖြစ်စေ။ ပြည်သူတွေကြား ပျံ့နှံ့သွားတာမျိုးဖြစ်စေ …
အားလုံး သိသင့်သိထိုက်တာတွေ ဖော်ပြ ပေးပို့ပေးတဲ့ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်…
လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်လို့ရတာ ရှိပါတယ။် ခြင်ထောင်ထဲမှာ အီးအီးပေါက်လို့ရတယ်
ဘောပွဲဒိုင်လုပ်မလား? နှစ်လုံးရောင်းမလား? သုံးလုံးရောင်းမလား? မာဆတ်ဖွင့်မလား?(ကိုယ်တော့ကြားသာကြားဖူးတာ ဘယ်နားနေမှန်းတောင်မသိသေးဘူး) အရက်ဆိုင်ဖွင့်ချင်လည်းရတယ်လေ
စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်ဝေရင် သူတို့ကို အုပ်ရေ ၅၀ တိတိပေးရတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ စာပေစိစစ်ရေးရုံးက၀န်ထမ်းတွေ အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ။ ဒါမှန်ပါတယ်။ စာဖတ်နာတဲ့လူတွေ မဟုတ်ဘူး။ မဲမဲမြင်ရင် ဖျက်ဆိုတာပဲ။ စာတစ်အုပ်လုံးကို အကုန်အစင်အရင်မဖတ်ဘဲ မဲမဲမြင်တာနဲ့ဖျက်ချတာပါ။ တကယ့်လိုရင်းကတခြား၊ သူတို့ထင်တာကတခြား။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်က ဥာဏ်သုံးရတယ်။ အမှာစာမှာ သူတို့လိုချင်တဲ့အနေမျိုးဖြစ်အောင် ရေးရတယ်။ စာအုပ်ကျလာပြီ၊ မျက်နှာဖုံးလည်းကျလာပြီဆိုမှ စောစောကရေး ထားတာကို ဖျက်ပစ်လိုက်တာမျိုး လုပ်ရပါတယ်။ ထပ်ထည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့။ တိုးတိုးနော်၊ လျှောက်မကြေငြာနဲ့။
အင်း သူဌေး ဖြစ်နိုင်တာက ခေတ်ပျက်တဲ့ အချိန်ရယ် နိုင်ငံပြည်လည် တည်ဆောက်တဲ့အချိန်ရယ် တဲ့ ဒီနှစ်ချိန်က သူဌေးအဖြစ်နိုင်ဆုံး အလွယ်တစ်ကူဖြစ်နိုင်နယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ မလုပ်ရဲလို့ မွဲနေတာ
အားးးးးး ဘာမှမဆိုင်တာတွေလာမန့်နေသလိုဖြစ်နေပြီ။ သူတို့အကြောင်းကတော့ မပြောချင်ပါဘူး ဆရာကြီးတွေပြောတာမှတ်သားဖူးတာတော့ ဘုရားဟောတောင်မှ စကားလုံြး့မ်းတမ်းတယ်ဆိုပြီး ဆင်ဆာဖြတ်ဖူးသတဲ့ ………. ဒီတော့ကျန်တဲ့သူရေးတာတွေကို လုပ်တာမဆန်းပါဘူးနော်